XL ACCOUNT - TORIO & fampitaovana manokana | FXCC
Home / XL ACCOUNT - TORIO & FITAFIANA
Kaonty XL - Fepetra sy fepetra manokana:
Manaiky ianao fa amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara amin'io Fampiroboroboana io, dia ho voafehin'ireo fepetra sy fepetra ("Terms") miaraka amin'ny FDC ny fifanarahana Customer Services sy ny Investment Services General Conditions of FDC, ary koa ny fepetra hafa rehetra momba ny Business izay mihatra amin'ny kaontinao ara-barotra. Tokony hamaky tsara ireo fepetra ireo ianao ary hamantatra tsara ny tenanao mety famborahana Mariho.
Mpikambana nahazo alalana: Ny vaovao FXCC mivantana Ny mpividy manokatra sy mamatsy vola ny kaontiny amin'ny vola (na ny tahan'ny kaontiny) dia eo anelanelan'ny $ 100 US sy $ 10,000 US.
Tsy misy Vaomiera na Swaps amin'ny kaonty XL amin'ny fametrahana sy / na fitoviana eo amin'ny ($ 100 - $ 10,000).
Ny kaonty amin'ny tahiry sy / na ny vola $ 10,000 eo ho eo dia halefa amin'ny kaonty Standard ary hiantehitra amin'ny Commission & Swaps araka ny voalazan'ny tranonkala FXCC ao amin'ny fizarana "Faharoa momba ny varotra".
Ny mpandray anjara amin'io fampiroboroboana io dia afaka manana kaonty kaonty XL ihany.
Ny fampiasana avo indrindra amin'ny kaonty XL dia miankina amin'ny habe amin'ny kaontinao araka ny ambany:
Deposit / Equity eo anelanelan'ny $ 100 sy $ 3000: Mitombo hatramin'ny 1: 300
Deposit / Equity eo anelanelan'ny $ 3000 sy $ 5000: Mitombo hatramin'ny 1: 200
Deposit / Equity eo anelanelan'ny $ 5000 sy $ 10,000: Mitombo hatramin'ny 1: 100
Ny habetsaky ny varotra mety ho azon'ny mpividy afaka manokatra amin'ny fotoana rehetra dia tsy mihoatra ny lanjan'ny standard 10.
Ny FXCC dia tokony hanana ny zo, amin'ny fahamendrehana tanteraka, hanaiky ireo Clients nampidirin'ny 3rd antoko eo ambanin'ny fampiroboroboana ny kaonty XL. Ny fampidiran-dresaka toy izany dia mahatakatra sy manaiky fa ny sanda fampidirana fanampiny ($ 5 isaky ny laharana serivisy) dia azo ampiharina amin'ny kaonty XL.
Ny endriky ny fanodikodinana, ny fanararaotana na ny endrika hafa amin'ny fanaovana asa mamitaka na fisalasalana amin'ny kaontin'ny kaonty rehetra an'ny mpanjifa, na ny fifandraisana hafa na ny fifandraisana amin'ny kaonty XL dia tsy afaka manatanteraka ny kaonty avy amin'ny tombontsoa rehetra omena sy / na ny tombony natao tamin'ity Fivoriana ity.
Ny FXCC dia miaro ny zo hampiato ny kaonty XL na hanova ny kaonty XL amin'ny "Account Standard" amin'ny alàlan'ny fisainany irery, tsy ilaina ny manome ny fanamarinana na fanazavana ny anton'ny fiatoana na ny fanovana.
Ny fifanolanana rehetra, ny fandikana ny fampiharana ny fepetra sy fepetra voalaza etsy ambony na ny toe-javatra dia miseho ary tsy voarakotry ny fepetra sy fepetra momba ny fampiroboroboana, ny fifandirana toy izany na ny tsy fisian'ny interpretation dia hamaha ny FXCC araka ny fomba fijery azy ho tsara indrindra ho an'ny rehetra. Io fanapahan-kevitra io dia ho farany sy / na hanekena ny mpandray anjara rehetra. Tsy hisy taratasy fangatahana hiditra ao.
Ny FXCC dia mitazona ny zo, satria izy irery no mihevitra fa mety, hanova, hanitsy, hanitatra, hanakana, hanafoana na hamarana ny Fivoarana, na ny lafiny rehetra amin'ny Fampiroboroboana, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana tsy misy ny filazana mialoha. Raha tsy misy ny toe-javatra, ny FXCC dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny fiovana rehetra, ny fanitsiana, ny fampiatoana, ny fanafoanana na ny fampitsaharana ny fampiroboroboana.